''धरातलविनाको अनावश्यक ठूलो बजेट'' - प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
धरातलविनाको अनावश्यक ठूलो बजेटप्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालराजनीतिक अवस्था अत्यन्तै जटिल भएको विशेष अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट आएको छ । सामन्यतया कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको घटना ज्यादै कम छन् । तर हाम्रो देशमा यो भयो । सरकारले एक तृतीयांश बजेट ल्याएर खर्च गरिसकेपछि राज्य सञ्चालनमा ठूलो सम...
''नेपालको आर्थिक विकासमा डा. पन्तको योगदान'' - नित्यराज पाण्डे
''नेपालको आर्थिक विकासमा डा. पन्तको योगदान'' - नित्यराज पाण्डेडा. यादवप्रसाद पन्तले अर्थशास्त्रको विशेष अध्ययनबाट शिक्षाक्षेत्र हुदै आर्थिक क्षेत्रमा प्रवेशे गरे । पछिल्ला दिनमा बैङ्किङ क्षेत्रमा लाग्दै गए । आफ्नो अध्ययन र अनुभवका आधारमा धेरै पुस्तक तथा लेखहरू जनसमक्ष राखे । उनले सार्क क्षेत्र र अन्...
''सबैलाई होइन, केहीलाई मात्र न्याय'' - जोसेप ई. स्टिग्लिज
''सबैलाई होइन, केहीलाई मात्र न्याय'' - जोसेप ई. स्टिग्लिजअन्तरराष्ट्रिय जगत्मा समृद्ध र सभ्य समाजको रूपमा स्थापित अमेरिकी ऋणबजारमा आएको आँधी बेहरीले विधिको शासनका विषयमा गहन प्रश्न उब्जाएको छ । विधिको शासनले बलियाबाट निर्धालाई बचाउँछ र सबैलाई समानताको अनुभूति गराउँछ । तर, कमसल ऋणका कारणले आर्थिक सङ्...
साना मुलुकका अनुसरणीय अभ्यासहरू
साना मुलुकका अनुसरणीय अभ्यासहरूजेफ्री फ्याङ्केलदुई दशकअघि, सन् १९८० को दशकमा धेरै मानिसलाई जापानको भरभराउँदो पूँजीवादी प्रणाली नै विकासको सबभन्दा राम्रो मोडल लागेको थियो । मानिसलाई संसारका अरू मुलुकले यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ वा गर्नेछन् भन्ने लागेको थियो । तर, सन् १९९० को दशकमा आइपुग्दा यो जापानी मोड...
''राजनीतिक अन्योल चिरेर जलविद्युत् विकास'' - ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
राजनीतिक अन्योल चिरेर जलविद्युत् विकास - ज्ञानेन्द्रलाल प्रधाननेपालमा पहिलो जलविद्युत् गृहको निर्माण भएको १ सय वर्ष भयो । तर, राणाकालीन समयमा जलस्रोतलाई आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा कहिल्यै लिइएन । पञ्चायतकालमा जलस्रोतलाई भारतसँग बार्गेनिङ गर्ने शक्तिका रूपमा मात्र लिइयो । यो १ सय वर्ष इतिहासमा ९० वर्ष त...
''गरीबी न्यूनीकरणका लागि गाउँ पर्यटन'' - डा. प्रेम शर्मा
''गरीबी न्यूनीकरणका लागि गाउँ पर्यटन'' - डा. प्रेम शर्मागरीबीको रेखामुनि रहेका ठूलो सङ्ख्याका नेपालीहरूको आर्थिकस्तर उकास्न पर्यटन क्षेत्र भरपर्दो माध्यम हो । त्यसमा पनि ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सके गरीबीलाई हटाउन ठूलो मद्दत पुग्नेछ । देशभर छरिएर रहेका पर्यटनगन्तव्य, स्रोतसाधन र आयामलाई उपय...
''कम्पनी ऐनका कमजोरीहरू'' -रुद्रप्रसाद पोखरेल
''कम्पनी ऐनका कमजोरीहरू'' -रुद्रप्रसाद पोखरेल कम्पनी ऐन २०६३ कम्पनी अध्यादेश २०६२ लाई प्रतिष्ठापन गरेर आएको हो । यसअघि कम्पनी ऐन २०५३ प्रचलनमा थियो । कम्पनी ऐन २०५३ ले केही निश्चित कागजपत्र केही निश्चित समयमा कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, न...
चिलिमेको शेयर र स्थानीयको हितरवीन्द्र भट्टराईचिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले रसुवा जिल्लाका आयोजनास्थल प्रभावित स्थानीयवासीलाई शेयर जारी गरेको छ । यो शेयर निष्कासनसँगै त्यहाँका जनता स्थानीय स्रोत र साधनमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न केही मात्रामा सफल भएका छन् । तर अझै पनि यो अधिकार पूर्ण रूपमा स्थापित...